‘Tompotany’ voambolana iray noterena ampiasaina…” · Global Voices teny Malagasy
‘Tompotany’ voambolana iray noterena ampiasaina…”
Voadika ny 02 Jona 2018 13:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, English, русский, English
Martín Quintana Elgueta dia profesora teny Espaniola sady mpikaroka akademika ao amin'ny Departemantan'ny Fanabeazana ao amin'ny Oniversiten'i Los Lagos ao Osorno, Shily. Ity manaraka ity dia dika antsoratry ny lahatsary fanadihadian'i Martín amin'ny zavon-teny manondro ny voambolana, “indígena” (tompotany).
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra 2957 nivoaka tanelanelan'ny Mey 2017 ka hatramin'ny Mey 2018 hita nanonona “indigena” (tompotany) ao anatin'ny angona Media Cloud amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny Espaniola ao Shily. (jereo amin'ny sary lehibe kokoa)
Manintona ny saina ny fisehoan'ny voambolana “tompotany” eto izay mifandray amin'ireo voambolana sasany nohadihadianay, tahaka ny voambolana “mapuche.”
Eto ny voambolana hoe “tompotany” dia hita misy ifandraisany tanteraka amin'ny hevitra rafitra, miaraka amin'ny tsirinkevitra mifandraika amin'ny fandraisana anjara, demaokrasia, ary rafitra ara-piadidiam-panjakana sasany, saingy tsy noraharahiana amin'izay toetrany izay. Izany no mahatonga ny voambolana hoe “tompotany” ho toy ny voambolana napetraka an-katerena, voambolana ekena ho avy aty ivelany ary mahavariana fa tsy miaraka amin'ny famantarana hafa toy ny fihenjanana, krizy ary herisetra, izay miseho rehefa amin'ny voambolana hafa, toy ny ‘mapuche’. Heveriko fa amin'ny lafiny iray, mampiseho dika ivelany ny voambolana hoe “tompotany” ao amin'ny (cosmogony) haififoronana sy fomba fijerin'ny mapuche izao tontolo izao, ary amin'ny lafiny hafa ihany koa, manome azy ny mari-panjakana nianarana.
Ity dia ao anatin'ny andiana Rising Frames norafetina ao anatin'ny hetsika nokarakarain'i Fernando Carías. Nanampy tamin'ny fanatontosana atrikasa natao ny 26 Mey 2018 tao Osorno, Shily izy izay namory hiaraka ao amin'ny toerana iray ny solontenan'ny vondrona sy vondrom-piarahamonina vitsivitsy mba hanadihady ny fomba isehoan-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Shiliana ary hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.